जव चिकित्सकले ३० वर्षका योगेशको पेटमा फलामका टुक्रा र किलाको थुप्रो देखे – Etajakhabar
जव चिकित्सकले ३० वर्षका योगेशको पेटमा फलामका टुक्रा र किलाको थुप्रो देखे
एजेन्सी । भारतको एक गाउँमा अनौठो घटना भएको छ । भारतमा रहेको एउटा अस्पतालमा डाक्टरले बिरामी योगेशको पेटको एक्सरे गराए । त्यसपछि अपरेशन गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो । अपरेशन गर्ने क्रममा योगेशको पेटबाट विभिन्न फलामका टुक्रा किला जस्ता ३३ प्रकारका अखाध्य पदार्थ निकालियो । परिवारको भनाइ अनुसार योगेशको टाउको दुखिरहने समस्या भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
उनको जे पायो त्यही उठाएर खाने नराम्रो बानी थियो । त्यसरीले उनको पेटमा फलाम र प्लाष्टिकका विभिन्न सामान थुप्रिएपछि उनको पेट दुख्न सुरु गरेको थियो । अपरेशनपछि योगशको स्वास्थ्यावस्था पहिले भन्दा धेरै सुधार भएको बताइएको छ । अहिले डाक्टरहरुले योगेशलाई केही दिनसम्म आफ्नै निगरानीमा राख्ने फैसला गरेका छन् ।
योगशकी आमा सुष्मा यादबले भनिन्, अपरेरशनपछि छोरा योगेशलाई भेटे । उनी पूरै ठीक अवस्थामा देखे । हामी कसैलाई थाहा भएन, उनले फलामको किला खान्छन् भनेर ।’ डाक्टर एमपीएन खरेले भने, ‘अपरेशन गर्न निकै मुश्किल थियो, तर अफल भयो । योगेशको पेटबाट सबै ती चिजहरु निकालियो । एक–दुई दिन पश्चात उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिनेछ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
Posted on: Friday, July 19, 2019 Time: 12:15:13
प्रदेश ५ को नाम ‘लुम्बिनी’, राजधानीका लागि आयो यि जिल्लाको प्रस्ताव
जनकपुरमा ब म जस्तै वस्तु देखिएपछि प्रहरीले दिए रातभरी पहरा
दुई कलाकारको निधनले प्रधानमन्त्री ओली स्तब्ध हुँदै श्रद्धाञ्जलि व्यक्त
कोठा न्यानो पार्न मकल बालेर सुतेका दुई महिने बालक सहित आमाको निधन
अटेर गरेको उत्तर कोरियालाई अतः नेपालले लगायो तह !
अकल्पनियताको पराकाष्ठा : ‘फोटो खोजेर यस माथि समबेदना लेख्दाको पिडा म शब्दमा बयान गर्न सक्दिन मित्र’ – कलाकार दिपकराज गिरि
दिनेश कोइराला जो बने ठगेरै अर्बपति बने !
कलाकार दिपक छेत्रीको निधनमा स्तब्ध बनेका दिपक छेत्री आफु पनि संसारबाट सधैका लागि बिदा भए !
युवक बसमा उनको पछाडि उभिएका थिए त्यसपछि उनको हातमा चिसो आएपछि…..
कलाकार दिपक क्षेत्रीको पोस्टमार्टममा पुग्दा श्रीमती बेहोस – कलाकारको चल्यो रुवाबासी (भिडियो)
प्रेमको नाटक गरेर युवतीको लाखौ लुट्ने युवक काठमाण्डौमा पक्राउ (भिडियो सहित)
द भ्वाईसका पहिलो विजेता सिडी विजय अधिकारीको गुनासो : जितेको गाडि अहिले सम्म पाएको छैन
घटना घटेको ३ दिन पछि धनुषाबाट बाहिरियो ६४ लाखको हिसाबकिताब !
देशभर बढ्यो चिसो: जुम्लाको तापक्रम माइनस ७, हिमाली भूभागमा हिमपात